မိုးသောက်ယံရဲ့အခန်းငယ်: January 2008
2 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 8:34 AM
ဒီရက်ပိုင်း အမေ့ကို ဖုန်းဆက်တော့မှ ကိုယ်ဘယ်လောက် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ လွတ်နေလဲ သိတော့တယ် အမေကတော့ မညည်းရှာပါဘူး ပိုက်ဆံပို့ရမလား အမေဆိုလည်း လောက်တယ် သားကြီး သားဘာသာ သုံးနဲ့ တကယ့်အမေပါပဲ။ ဈေးနှုန်းတွေ ဘယ်လောက် ဖြစ်ကုန်ပလဲ အမေ ပြောပါဦးဆိုတော့မှ သားရေ ဆီက တပိသာ ၄၅၀၀ ကြက်ဥ တလုံး ၁၃၀ ကန်ဇွန်းရွက် တစည်း ၆၀ မုန့်ဟင်းခါးတပွဲ ၃၅၀ ၄၀၀ ဆိုတော့မှ ဘုရားရေ လို့ တမိတော့တာပါပဲ။ ရန်ကုန်က လူတွေ ဘယ်လို ရှင်သန်ကြမလဲ လို့ တွေးမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ အဲဒီနေ့ညမှာပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆီဈေးတက်တာတွေကို သရော်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရတော့ ကြည့်မိရင်း တကယ့်ကို သဘောကျတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ။
နောင်တချိန် ဆီဈေးမတတ်နိုင်တော့တဲ့အခါ ခုလို တောင်ပံလေး တပ်မယ်လေ
ဆီအစား သက်ရှိတွေ အစားသုံးမယ် ဆိုရင်ကော
ဒါမှ မဟုတ် ဒီလို ဘတ်ထရီနဲ့ဆို မဆိုးဘူးထင်တယ်
နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတာပဲ ကောင်းပါတယ်
Labels: ဟိုဟိုဒီဒီရေးထားတာတွေ, ရေးထားတာလေးတွေ, ရောက်တတ်ရာရာ
1 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 3:20 AM
ညည်းရဦးမယ်ဗျာ ဒီရက်ပိုင်း ဘယ်လို ဂြိုလ်ဆိုး ၀င်တယ် မသိပါဘူး လူပေါင်းစုံနဲ့ ပြသနာပေါင်းစုံ ကို တက်နေတော့ တာပါပဲ။ မဖြစ်စလောက် ရာထူးအဆင့်လေး နောက်တဆင့် ထပ်တက်ပါတယ် နေရင်းထိုင်းရင်း လူမုန်းခံရတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်တော့ တာပါပဲ။ ဟိုး အရင်က ခင်ခင်မင်မင် ပေါင်းခဲ့တဲ့ သူကလည်း ခုကျမှ ထိသလို ရိသလိုတွေ လုပ်လိုလုပ်။ တကယ်ပါပဲ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ အလုပ် လုပ်ရတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ အရမ်းကပ် အရမ်းခိုတဲ့ အကောင်တွေကိုးဗျ အကုန်လုံးကို မဆိုလိုပါဘူး။ ကျနော် တွေ့ရတဲ့ တော်တော်များများ ကတော့ ဒီအတိုင်းပဲဗျာ။ သူများ သာရင် မနာလို သူများဒုက္ခ ရောက်ရင် ရယ်ချင်ကြတဲ့ လူတွေကိုးဗျ။ ကျနော့် လောက် ပျော်ပျော်နေတတ်တာ ကျနော်ပဲ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုရက်ပိုင်းမှာတော့ အတော့ကို စိတ်ညစ်ပီး အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်တွေပေါ် နေတော့တာပဲဗျာ။ အလုပ်ကသက်သာပေမဲ့ ဒီလို စိတ်ညစ်စရာမျိုးတွေ ရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာ အားလုံးပဲ ကျနော့်လို ခံစားကြဖူးမှာပါ။ ခက်တာကလည်း ကျိကျိတက် ချမ်းသာတဲ့ မိသားစု မျိုးက ပေါက်ဖွား လာတာ မဟုတ်တော့လဲ အခက်သားလားဗျ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ အတူမလုပ်ချင်လို့ အလုပ် ထွက်မယ်ဆိုပီး ဆုံးဖြတ် လို့ကလည်း မဖြစ်သေးပြန်ဘူး ရှေ့ဆက် လျှောက်ရမဲ့ လမ်းကအဝေးကြီး ကျန်သေးတယ် ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပြည့်ဖို့အတွက် ကြိုးစားရဦးမယ်။ သူတို့ပေးထားတဲ့ ငွေက လုပ်ရတဲ့ အလုပ်နဲ့ဆို ဘယ်မှာမှ မရနိုင်ဘူးလေ။ အဲဒီတော့လည်း ငါဟဲ့ ယောကျာ်းလို့ တွေ့သမျှ ကြုံသမျှ ဒုက္ခတွေကို သင်ခန်းစာလို့ မှတ်ပီး ပေဖြစ်သမျှတော့ ခံရဦးတော့ မှာပေါ့လေ။
Mobile နဲ့ Gtalk မှာ ချတ်မယ်
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 11:08 AM
ကဲ ဒီတခါတော့ ကျနော် ရထားတဲ့ အသစ်အဆန်းလေးကို ဝေမျှပါရစေ။ ဒါလေးက သိရင်လည်း သိပီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ မသိရသေးတဲ့ လူတွေ သိရအောင်လို့ တင်လိုက်တာပါ။ eBuddy တဲ့ ဒီကောင်လေးက ဘယ်လို အသုံးဝင်လဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ အပြင်တနေရာရာ ရောက်နေတဲ့အခါ အသုံးတော်ခံ Laptop လေးများ မပါလာတဲ့အခါမှာ အရေးဟဲ့ အကြောင်းဟဲ့ အွန်လိုင်းက သယ်ရင်းတွေကို စကားပြောချင်တဲ့အခါ မှာချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ်နဲ့မကွာပါနေကျ လက်ကိုင်ဖုန်းလေး ကနေ တဆင့် ချတ်ဆိုဒ်တွေကို ၀င်နိုင်တဲ့ အတွက် အတော့်ကို အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကနေပီးတော့ MSN, AOL, Messenger, G-talk, တို့ကို တခါတည်း Sign In ၀င်ပီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Messenger တို့ Gtalk တို့မှာ Conference အထိ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ ကဲ အသုံးပြုချင်တယ် စမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်ကနေ ဖုန်းကို ဒေါင်းလုဒ် ယူပီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲတခုတော့ ရှိတယ်ဗျ ဖုန်းထဲက ခရက်ဒစ်တော့ နည်းနည်းစားတယ်နော် MSG လိုင်း ၆၀ ကျော်ရင်။ အင်တာနက် ပေါပေါလောလော သုံးနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးကဆိုရင်တော့ ၀ိုင်ယာလက်စ် ကီးဘုတ်လေးနဲ့ ဖုန်းကို ချိတ်ပီးတော့တောင် တနေကုန် ချတ်နိုင်ပါ့ဗျာ။ ။
>--> !! Click Here To Download !! <--<
Labels: အသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကောင်းများ
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 9:46 AM
ဒီတခါတော့ အိမ်တက်ပွဲက အချိုတွေ စားပီးတဲ့ အပေါင်း အသင်းတွေကို နည်းနည်းလောက် အလုပ် ပေးမယ် နော် ဥာဏ်စမ်းလေးပါ လွယ်ပါတယ် ဖြေကြည့် ကြပါဦးနော်။
ဒီလိုဗျ လမ်းတခုမှ ဈေးကို ဘဲဥ သွားရောင်းဖို့ တောင်းနဲ့ ထမ်းလာတဲ့ အဒေါ်ကြီး တဦးကို မြင်းစီးသမား တဦး က မတော်တဆ တိုက်မိသွားတာ ဘဲဥတောင်းဟာ ကျကွဲပါလေရောတဲ့ အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ ဆိုက်ကား ဖြစ်ဖြစ် ဆိုက်ဘီး အဲလေ စက်ဘီး ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် ထားလိုက်ပါ ဇာတ်လမ်းက အခုစမှာ အဲဒီတော့ အဒေါ်ကြီးက အလျော်တောင်းတာပေါ့ တိုက်တဲ့လူက လျော်ပေးပါ့မယ် ဒါပေမဲ့ အဒေ့ါ် ဘဲဥတွေ ဘယ်နှစ်လုံးပါလို့ ကျနော်က ဘယ်လောက် လျော်ပေးရမယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိမတုန်းတဲ့ အဲဒိတော့ အဒေါ်ကြီးက နပ်တယ်လေ မောင်ရင် မပူနဲ့ ကျုပ်အမှတ်အသားရှိတယ် ဒီလိုတဲ့ .. ဘဲဥတွေကို နှစ်ပုံ ပုံလိုက်တဲ့အခါမှာ တပုံက တလုံးပိုနေတယ် သုံးပုံ ပုံလိုက်တဲ့ အခါ ၂ ပုံညီပီး ၁ပုံက တလုံးပိုတယ်၊ ၄ ပုံ ပုံလိုက်တဲ့အခါ ၃ပုံညီပီး ၁ပုံက ၁လုံးပိုတယ်၊ ၅ပုံ ပုံတဲ့အခါ လေးပုံ ညီပီး တပုံက တလုံးပိုတယ်၊ ၆ပုံ ပုံတဲ့အခါ ၅ပုံညီပီး တပုံက ၁လုံးပိုပါတယ် နောက်ဆုံး ၇ပုံမှာတော့ အားလုံး ညီတူပါပဲတဲ့။ အဲဒီတော့ အဒေါ်ကြီး တောင်းထဲမှာ ဘယ်နှစ်လုံး ပါမလဲဆိုတာ သယ်ရင်းတို့က ဖြေပေးနော်။
၀ိုင်ကဖြေတဲ့ လူတွေကတော့ အထူး အခွင့်အရေး အနေနဲ့ မှန်ခဲ့ရင် ချတ်ပွိုင့် ၃၀၀၀ ဆုချပါမယ်။ ၁ယောက်ထက် ပိုခဲ့ရင်တော့ အချိုးကျပေါ့နော် ပထမဆုံး သုံးယောက်ကို ရွေးပါမယ်။ ကဲ ဘော်ဒ်ါတို့ရေ :D ။
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 8:32 AM
တချိန်တုန်းက စက္ခုအာရုံ အလင်းမရလို့ မိမိဘာသာ မုန်းတီးနေတဲ့ ကောင်မလေး တယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သူရဲ့ ချစ်သူကောင်လေး ကလွဲရင် လူအားလုံးကို မုန်းတီးတော့တာပေါ့။ သူ့ချစ်သူ ကောင်လေး ကတော့ သူ့ကို အရမ်းချစ်ပီး သူ့အပေါ် အရမ်းကောင်းရှာပါတယ်။ သူမလိုအပ်တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ သူမဘေးမှာ အစဉ်အမြဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်မလေးက ပြောပါတယ် တကယ်လို့ သူမသာ မျက်စိနှစ်ကွင်း အလင်းရပီး ကမ္ဘာ လောကကြီးကို မြင်တွေ့ခွင့် ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူမဟာ ချစ်သူကောင်လေးကို လက်ထပ်မှာ အမှန်ပါပဲ လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်။
တနေ့မှာတော့ ကံကောင်း ထောက်မစွာနဲ့ ကောင်မလေးအတွက် မျက်စိအလှူရှင် ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကဲ ဒီအချိန် မှာတော့ ကောင်မလေးဟာ သူ့ချစ်သူ ကောင်လေး အပါအ၀င် လှပတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို မြင်တွေ့ခွင့် ရခဲ့ ပြီပေါ့။ ချစ်သူကောင်လေးက “ကောင်မလေးရေ မင်း အခု အရာရာကို မြင်တွေ့နိုင်စွမ်း ရှိနေပီလေ ငါ့ကို လက်ထပ်ခွင့် ပေးနိုင်မလားလို့” မေးတဲ့အခါမှာတော့ ကောင်မလေးဟာ အံအားသင့်ပီး ရှောခ့် ရသွားပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူမချစ်သူ ကောင်လေးဟာလဲ သူမလိုပဲ မျက်မမြင်တယောက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ အဲဒီနောက် မှာတော့ သူဟာ ကောင်လေးကို လက်ထပ်ဖို့ ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။
ကောင်လေးဟာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှု အပြည့်နဲ့ သူမနဲ့ အဝေးဆုံးကို ထွက်ခွာ သွားပါတော့တယ်။ နောင်တချိန် မှာတော့ ကောင်လေးဟာ ကောင်မလေးဆီကို တကြောင်းတည်းပါတဲ့ စာတစောင်ကို ပိုခဲ့ပါတယ် ကောင်လေး ပြောထားတာကတော့ …..
“ကောင်မလေးရေ ကျေးဇူးပြုပီး ငါ့မျက်လုံးတစုံကို တန်ဖိုးထားပေးပါ” တဲ့။ ။
ဒီအကြောင်းလေးဟာ အွန်လိုင်းမှာ Mail Forward တစောင်အနေနဲ့ ပြန့်နေပီးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး တခုပါ။ ကျနော်လဲ သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီ ကတဆင့် လက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ ဖတ်ဖတ်ပီးချင်းပဲ မဖော်ပြနိုင်တဲ့ ခံစားချက်လေးတခု ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ ဝေမျှလိုတာကြောင့် ရေးတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ဘ၀ အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခါမှာ သူတို့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတိတ်ကို မေ့ပစ်တတ်ကြတာ ဟာ အမှန်ပဲ လား။ ကျနော့် ဘ၀မှာတော့ ၂ခါလောက်ကို ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရော ဆုံခဲ့ဖူးကြလား။ ဒီစာလေး ဖတ်ပီး တစုံတခုစိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် တဆိတ်လောက် ကွန်းမန့်လေး ချန်ခဲ့ပါလားဗျာ။ ။
ကျေးဇူးတင်လွှာ နှင့် အိမ်တက်မင်္ဂလာ
2 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 9:33 AM
ကဲ ဘလော့စလုပ်တည်းက ဘာ အကျွေးအမွေးမှလဲ မလုပ် ဘာဧည့်ခံပွဲမှလည်းမလုပ် ကျေးဇူးတင်သင့်တဲ့ သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးမတင်ရသေး ခုမှပဲ ကျေးဇူးတင်ပွဲနဲ့ အိမ်တက်ပွဲလေး လုပ်တော့မယ်နော် ။ ဒန့် တန့် တန့် .. ပထမဆုံး ကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ ကိုညီလင်းဆက်ပါပဲ ဘလော့ဂ်တွေ လိုက်ဖတ်ရင်း တဖြည်းဖြည်း စိတ်ဝင်စား လာတော့ ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်မယ် ကြံတော့ ဘယ်က စလုပ်ရမှန်း မသိဘူးလေ အဲဒါနဲ့ ချတ်ရွမ်းက အမ တယောက်ကို မေးကြည့်တော့ သူက ကိုညီလင်းဆက် ရဲ့ လင့်ခ်လေးကို ပေးပါတယ် အဲဒီကနေ လေ့လာ ကြည့်ပေါ့တဲ့။ ဒါပေမဲ့လည်း သူ့ဆိုဒ်ကို တော်တော်နဲ့ မရောက် ဖြစ်သေးပါဘူး အလုပ်ရှုပ် နေတာက တကြောင်း ချတ်ထဲမှာ အချိန် ကုန်နေတာနဲ့ တကြောင်း မစဖြစ် ခဲ့ပါဘူး တလလောက် နေတော့မှ လုပ်မယ်ဟဲ့ ဆိုပီး ဘွတ်ခ်မာ့ခ် လုပ်ထားတာလေး ပြန်ရှာကြည့် ကိုညီ့ စာလေးတွေ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းက ဘလော့လုပ်မယ်ဆိုရင် ဇော်ဂျီဖောင့် ဘယ်လို assign လုပ်ရမယ် ဆိုတာတွေ့ပီး ဘလော့လည်း စတင် လုပ်ဖြစ် လာတာပါပဲ။ သူ့ဆီ ကမှ တဆင့် ကိုမောင်လှဆီ ရောက်ပါတယ်။ နောက်နေ့ တွေမှတော့ စလုပ် သူတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အခက်အခဲ တွေကြုံတွေ့ လာရတာပေ့ါဗျာ။ ချတ်ထဲမှ ညီငယ် တယောက်ကပဲ အကိုလုပ်မယ်ဆို ဒီစာအုပ်လေး အတိုင်း ကြည့်လုပ်ချေ ဆိုပီး ကိုစေတန်ဂေါ့ဒ်ရဲ့ ဘလော့လုပ်နည်း PDF လေးကို ပေးလာပါတယ်။ သူပြောထား တဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ် ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော့် ဘလော့ဂ်လေး စပေါ် လာတော့တာပါပဲ။ ရုပ်လုံးသာပေါ်လာတာ စာတွေကတော့ ကောင်းကောင်း မပေါ်သေးဘူးဗျာ တချို့နေရာတွေမှာ ? တွေ ပေါ်နေတာ ဆိုတော့ကာ အတော့ကို စိတ်အဆင်းရဲ သားလားဗျ။ နေ့တိုင်း ဆီဗုံးတွေ အော်ပီး အကူအညီ တောင်းရတာလည်း အမောပေါ့။ နောက်ဆုံးကိုယ်ကသာ စာတွေတင်တယ် သူများတွေမေးတော့ မြင်ရတယ် ကိုယ်ကျတော့ကိုယ့်စာ ကိုယ်မမြင်ရဘူး။ ကဲ နောက်ဆုံး ဒီလောက်တောင်ရှိလှတာ ဖျက်ပစ်မယ်ဆိုပီး ဘလော့ကို ပြန်ဝင်တုန်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အလွမ်းအိမ်လေးက gtalk မှာ လာအတ်ပီး ကူပေးတော့မှပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကို မြင်ရပါတော့တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့အထိ ကျနော့ဘလော့ဂ်လေး အသက်ဆက်နိုင်အောင် ကူပေးတဲ့ အလွမ်းအိမ်ကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်း ဒီနေရာမှ ပြောချင်ပါတယ်။ နောက်တယောက် ကတော့ ပီးနပ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်က ကိုယ့်ဘာကိုယ်သာ မလုပ်တတ်တာ လုပ်ချင်တာတော့ အများသားလားဗျ။ အဲဒီတော့ အဲလို စိတ်တိုင်းကျ အပူကပ်ရမဲ့ သူကို ကပ်ရ တာပေါ့။ သယ်ရင်းလေး ပီးနပ်က ကျနော် အကူအညီတောင်းသမျှ တခါမှ မငြင်းပဲ လုပ်ပေးရှာပါတယ်။ ကျနော် ဂျီးများသမျှကိုလည်း စိတ်မဆိုးပဲ လုပ်ပေးရှာတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့ကို ဂျီးသောက်ယံလို့ နာမည် တပ်ပေး တာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့နော် :D။ တမ်းပလိတ်တွေ စိတ်တိုင်းမကျလို့ ပြောင်းခိုင်းတိုင်း ၂ခါ မပြောရပဲ ပြောင်းပေးပါတယ်။ သူဆောက်ပေးတဲ့ ဒီနောက်ဆုံး အိမ်လေးကတော့ ကျနော့ စိတ်တိုင်းကျပါပဲ။ အဲဒီအတွက် သယ်ရင်းလေး ပီးနပ်ကိုလည်း ဒီနေရာက ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။ နောက်တယောက်က ကိုစိုးထက်ပါ ကျနော့ ဘလော့လေးကို မှန်မှန်လာလည်တဲ့အတွက်ပါ :D။ နောက်ကျေးဇူးတင် ရမဲ့ သူများ ကျန်ခဲ့သေးရင်လည်း ဒီနေရာကနေပဲ အထူးကျေးဇူးပါလို့။ ကျနော့်ဆိုဒ်လေးကို လာလည်ကျတဲ့ သယ်ရင်းများ အားလုံး ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ။ ။
ကဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြော အပီးမှာ ကျနော့်ရဲ့ အိမ်တက်မင်္ဂလာလေးကို ကျင်းပပါပီ။ ကိုကဒေါင်းပြောသလို ဘယ်သူကစလိုက်တဲ့ အလေ့အထလဲတော့ မသိဘူးပေါ့နော် အိမ်တက်ပွဲအတွက် ထမင်းပွဲလေးတွေနဲ့ ပြင်ဆင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ပုံလေးတွေကို သုံးခွင့်ပေးတဲ့ ၀ိုင်အေအမ်စီ ဖိုရမ် နဲ့ လုလုဝိုင်းတော်သားများကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ ။
ကဲ သုံးဆောင်နိုင်ပါပီ ခင်ဗျာ။ အ၀သာစားဗျ ကုန်သွားလည်းအရေးမကြီးဘူး :D ။
ဒါလေးကတော့ စားပီးသောက်ပီး အချိုတည်းဖို့ပေါ့
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 7:10 PM
ကျနော်တို့လို့ ပြည်ပရောက်နေတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် တချိန်က လမ်းထိပ် အုတ်ဘောင်လေး ပေါ်မှာ ဂစ်တာတီး သီချင်း ဆိုခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်သတိရကောင်း ရကြမှာပါ။ တခါတလေလည်း ရေမြေခြား ကွာဝေး နေတဲ့ ချစ်သူကို တမ်းတလွမ်းဆွတ်မိတဲ့ အခါ ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ဂစ်တာလေး တီးပီး သီချင်းဆိုညည်းကြဖူးမှာပါ ဒီလိုပါပဲ ချစ်သူမှ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ညစ်တဲ့အချိန် စိတ်ပျော်တဲ့အချိန် စိတ်အပန်းဖြေချင်တဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း ဂီတဟာ အစွမ်းထက်လက်နက်တခုပါပဲ။ အဲဒီလိုခံစားချက်လေးတွေ ရှိလာလို့ ရုတ်တရက် တီးခတ်ချင်စိတ် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာ ကိုယ်တီးချင်တဲ့ သီချင်းကို နုတ်စ်မသိလို့ မတီးရတဲ့ အခါတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလို အခက်အခဲလေးတွေကို ကျော်နိုင်ဖို့အတွက် ကျနော့ သူငယ်ချင်း Young (ယန်း) က သီချင်းစာသားနဲ့ Chord လေးတွေချည်း သီးသန့်စုထားတဲ့ Web Site လေးတခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ဒီ Site လေးဟာ ကွန်ယက်ပေါ် ရောက်ရှိလို့ လာခဲ့ပါပြီ။ ကဲ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ချစ်သူကို လွမ်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ညစ်တဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ပျော်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် တီးချင်ခတ်ချင်တဲ့အချိန် နုတ်စ်မသိလို့ မတီးရမဖြစ်ရလေအောင် ဒီ Site လေးကို အလည်လာခဲ့ကြပါလို့ Myanmar Lyric က ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ။
မြန်မာ Lyric ကို ဒီနေရာ မှဝင်ရောက်လည်ပတ်နိုင်သလို ဆိုဒ်ဘားမှ လင့်ခ်မှလည်း ၀င်ရောက် လည်ပတ် နိုင်ပါတယ်။
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 9:42 AM
ဒီနေ့ကတော့ ကျနော့်အတွက် အပျော်ဆုံးနဲ့ ဘ၀မှာ အမှတ်တရ အဖြစ်ဆုံး နေ့တနေ့ပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတာကို ကျနော်ပြောပြပါမယ်။ ဒီနေ့ညဘက် Check In ၀င်တော့ ကျနော်တို့ Dept ရဲ့ တလတခါ ပြုလုပ်တဲ့ အစည်း အဝေးရှိပါတယ်။ ဒီလိုညမျိုးဆို ကျနော်တို့ Attendant တွေအားလုံးဟာ စိတ်အနည်းငယ် ညစ်ညူးတာတော့ အမှန်ပါပဲ ဘာလို့ဆိုတော့ Day Shift Staff တွေဟာလည်း တနာရီခွဲလောက်နေပီးမှ အဲဒီအစည်းအဝေးကို တခါ ပြန်လာရတာပါ။ Night Shift Staff တွေဟာလည်း ၄၅ မိနစ်လောက် စောပီးဝင်ရတာဖြစ်တဲ့ အတွက်ပါ။ ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့ဗျာ မတက်ရင်လဲ Warning Letter က ကိုယ်ကတောင်းစရာမလိုပဲ ကိုယ့်ဆီ အော်တို ရောက်လာမှာ ဆိုတော့ကာ မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းပေါ့။ ရှင်းပြနေတာနဲ့ ရှည်နေပီ ကဲ ကျနော် ဘာကြောင့်ပျော်ရသလဲ ဆိုတာကို ပြောပြပါမယ်။ ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာ ကျနော်ဟာ ရိုးရိုး Attendant ကနေ နောက်တဆင့်ကို ကံထူးစွာနဲ့ Promote ရရှိလိုပါပဲ။ ဘာကြောင့် ကံထူးစွာလို့ သုံးရလဲဆိုရင် ကျနော့ရဲ့အရှေ့မှာ တန်းစီနေတဲ့ Senior တွေက အများကြီးပါ။ ဒီအများကြီးကို ကျော်ပီး ရရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ ကံထူးစွာလို့ သုံးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရာထူးတက်တော့ ဘာဖြစ်လဲ ? လစာပိုရတာပေါ့ဗျာ ရှင်းရှင်းလေးပါ ။ လစာပိုရတော့ ပျော်တာပေါ့ အဟဲ ။ ဒီသတင်းကို ထုံစံအတိုင်း Memo မထွက်ခင်တည်းက သို့လော သို့လော ကြားခဲ့ရပေမဲ့ ကျနော် မယုံရဲ ခဲ့ပါဘူး။ ရမယ်လို့လဲ ထင်ကိုမထင်ထားခဲ့တာပါ။ အဲဒီကြားက ရခဲ့တော့ ပျော်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဘ၀မှာ ပထမဆုံး လုပ်တဲ့အလုပ်မှာ ပထမဆုံးရာထူးတက်ခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းကိုပဲ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်က မြင့်မားပါတယ်ဗျာ။ ဒီသတင်း သိသိရခြင်းတုန်းက မသေချာတဲ့ အတွက် မေမေ့ကိုတော့ မပြောပြသေးပဲ ချစ်သူငယ်ချင်းမလေး နှစ်ယောက်ကိုသာ ပြောပြပီး ရင်ခုန်ခဲ့ရတာပါ။ သေချာပီဆိုတော့မှ သက်ပြင်းကို ဒုန်းဒုန်း ချနိုင်တော့တာပါပဲ။ ကျနော်ရှေ့က စီနီယာအကိုတွေကတော့ အားနာမိတာ အမှန်ပါပဲဗျာ။ ကဲ ခုတော့ မေမေ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပီး ကြွားဦးမယ်ဗျာ။
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 8:29 AM
မနေ့က ထုံးစံအတိုင်း တလတခါ ရတဲ့ Shore Leave ကို ဆင်းပီး ဖြုန်းခဲ့သုံးခဲ့ ကြတယ်လေ အရင်လတွေ အတိုင်းပဲ သိပ်ပီး ထူးခြားတာမရှိလို့ အတိအကျကြီးတော့ မရေးတော့ပါဘူး။ ဒီတခေါက်မှာ လွဲချော်ခဲ့တာဆိုလို့ သူငယ်ချင်းတယောက် Boat Drill မှာ Suspension ထိထားလို့ အောက်ဆင်းဖို့ရာ သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိရဲ့ ခွင့်ပြုချက်လိုတာကြောင့် လိုက်ရှာရင်း ကျနော်တို့နဲ့အတူ ပါမလာနိုင်ပဲ ကျန်ခဲ့ပီး နောက်ဖယ်ရီနဲ့ မှသာ ပါလာနိုင်တာ တခုပဲ လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတခေါက်မှာ ထူးတာဆိုလို့ ကျနော့် ချစ်သူငယ်ချင်း တွေဆီကို ဖုန်းခေါ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဖုန်းခေါ်တာဘာထူးဆန်းလဲလို့ မေးကောင်းမေးစရာရှိပါတယ် မလောပါနဲ့ ပြောပြမှာပါ :D။ ဒီလိုပါ ကျနော်ခေါ်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာက အပြင်မှာ ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ပါဘူး ကျနော့် အွန်လိုင်း ချတ်ရွမ်းက အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း သုံးယောက်ဆီကို ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ကြတာဆိုတော့ အရမ်းခင်ပေမဲ့လည်း ကျနော်တို့စကားမပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး ချတ်ရွမ်းမှာ စာသားတွေနဲ့အိုင်ကွန်တွေနဲ့ ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲ ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတာပါ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဖုန်းမခေါ်ခင် စဉ်းစားပါသေးတယ် တချို့သူငယ်ချင်းတွေက အထဲမှာ ရင်းနှီးကြပေမဲ့ အပြင်မှာ ဖုန်းခေါ်ရင် ဘာညာ မကြိုက်ကြဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က တယောက်နဲ့ တယောက် အရမ်းချစ်ကြတာမို့ ကျနော်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ကျနော်ကသာ စိတ်ထဲ လျှောက်တွေးနေပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် ချတ်ထဲမှာ စကားပြောသလိုပဲ တကယ့်ကို အပြောအဆို မပျက်ပါဘူး။ အဲ သုံးယောက်ထဲက တယောက်ကတော့ ဘယ်လိုမှ ခေါ်လို့မရလို့ မခေါ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါလေးက ကျနော့်အတွက် အမှတ်တရပါ။ နောက်တခုက ကျနော့်ရဲ့ အခန်းဖော် သူငယ်ချင်းက အပြီးပြန်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ယောက်လုံး တခါမှ မလုပ်ဖူးတဲ့ အရက်တူတူဝယ်သောက် ကြမယ်ဆိုပီး ၀ယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တခါမှမလုပ်ဖူးဘူးဆိုတာ မသောက်ဖူးတာကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော် ဒီလို ၀ယ်သောက်တာ ဒါပထမဆုံးပါလို့ အရင်တုန်းကတော့ ကိုယ်တွေက ယမကာကြိုက်သူတွေလဲမဟုတ်တော့ ၀ယ်မသောက်ကြပါဘူး မဖြစ်မနေ ပါတီ ပွဲတွေရှိမှသာ ကုန်းဆင်းကြတာများပါတယ် :D ။ အဲဒီလို မလုပ်ဖူးတာကို လုပ်မိလို့လားမသိပါဘူး။ ကိုယ်တွေရွေးလိုက်တဲ့ အမျိုးအစားက ဖြစ်ချင်တော့ ကုန်နေပါတယ် Cancel လဲ လုပ်လို့မရပါဘူးတဲ့ အဲဒါနဲ့ သူတို့ သွားယူတာကို ၄၅ မိနစ်နီးပါး စောင့်ခဲ့ကြရပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ ကျနော့်ဆီမရောက်တော့ဘူး ထင်တဲ့ ကျနော့် သူငယ်ချင်းတယောက်ပို့ထားတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးဟာ မနေ့ကညမှာပဲ ရောက်လာပါတယ်။ တန်ဖိုးနည်းတာ များတာ မဟုတ်ပဲ တယောက်ယောက်ဆီက လက်ဆောင် ရရှိရင် ပျော်တတ်တဲ့ ကျနော့်အတွက် တကယ့်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်း ကတော့ တခြားသူ မဟုတ်ပါဘူး မိုးပြေး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းရေ ဒီနေရာကပဲ ပြောတော့မယ် ကျေးဇူးပါလို့ :P ။
Labels: ကျနော့မှတ်စု, ရောက်တတ်ရာရာ
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 8:52 AM
ဘလော့ဂ်ဂါ အကိုတယောက်ရေးတဲ့ ပို့စ်တခုကို ဖတ်တုန်းက အမှုမှတအမှတ်မဲ့ ဖတ်ခဲ့ပေမဲ့ အခုတလောမှာ စဉ်းစား စရာ ­­­­တွေ ၀င်လာရင်းက အဲဒီပို့စ်လေးကို ပြန်စဉ်းစားတော့ အတွေးတွေ ၀င်လာပါတော့တယ်။ သူရေးထားတာက အခုခေတ်မှာ မသုံးနိုင်ရင် ခေတ်မမှီနိုင်လောက်အောင် ခေတ်နဲ့အများကြီး မျက်ခြေပျက် သွားလောက်အောင် နားမလည်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်း ကြောင့် ရရှိမဲ့ ဆိုးခြင်း ကောင်းခြင်းများပါပဲ။ အင်တာနက်ကို ကောင်းတဲ့လမ်းက အသုံးချနိုင်ရင် ဆေးကောင်း တခွက် ဖြစ်နိုင်သလို လွဲမှားစွာ အသုံးချမိရင်တော့ သောက်သုံးသူအတွက် ဆေးခါးတခွက်ဖြစ်စေမှာ အမှန် ပါပဲ တဲ့။ အဲဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပီးတော့ ကျနော် ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်သုံးသပ် ကြည့် ပါတယ် သိပ်ကို စဉ်းစားစရာ မလိုလိုက်ပါဘူး တမိနစ်ပါပဲ တကယ့်ကို တမိနစ်ပါပဲ။
ကျနော်ဟာ ဆေးခါး သောက်သုံး နေသူ တယောက်ပါ သိသိကြီးနဲ့ သောက်သုံးနေသူတယောက်ဆို ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော် သင်္ဘောပေါ် စရောက် ပီး ၁၀ လအကြာမှာ ကွန်ပျူတာဝယ်ပီး အင်တာနက်ချိတ်သုံးခဲ့တာပါ။ ခုဆိုရင် ၁၉ လ ဖြစ်နေပီပေါ့။ အဲဒီ သုံးခဲ့တဲ့ ၉ လလုံးမှာ ကျနော် ၀င်ခဲ့တဲ့ Web Site က သုံးလေးခု သာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ Chat Room Site ပါပဲ။ ကွန်ပျူတာဝယ်ခဲ့စဉ်ကတည်းက Chat Room ၀င်မယ်ဆိုပီး ရည်ရွယ်ချက် ကြီးကြီး မားမားနဲ့ကို ၀ယ်ခဲ့တာပါ။ ကွန်ပျူတာ မ၀ယ်ခင်တုန်းက ကျနော်အတွက် အလုပ်ချိန်ပြင်ပ ကိုယ်ပိုင် အချိန်တွေဟာ များလှပါတယ်။ စာဖတ်ချိန်ဆိုတာလည်း သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကို ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျူတာ ၀ယ်ပီးချိန်က စပီးတော့ ကျနော်အတွက် အဲဒီအရာတွေအားလုံးဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် အဖြစ်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတော့ တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းမင်တဲ့ ကျနော့်အတွက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဝေးနေချိန်မှာ Chat Room ဟာ ကျနော့်အတွက် သူငယ်ချင်းတွေ အများအပြားရရှိစေလို့ပါပဲ။ ကျနော် ၀င်တဲ့ Chat Room ကို ကျနော် ကွန်ပျူတာဝယ်ပီးလို့ စ၀င်တဲ့နေ့ကစပီး ဒီနေ့အထိ အသည်းအသန် နေမကောင်းတုန်းကတခါ အရမ်း စိတ်ညစ် တုန်းက တခါ အားလုံးပေါင်း ၄ ရက်လောက်သာ မ၀င်ပဲနေခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အကြောင်းကြောင်းနဲ့တော့ ပျက်ကွက်မှုကိုမရှိခဲ့တာပါ။ ကုန်ကုန်ဗျာ ကျနော်တို့လို သင်္ဘောပေါ်မှာ တလလုံးနေပီး ခြေချုပ်မိတဲ့ သူတွေ အတွက် တလတခါ ပေးတဲ့ Shore Leave လိုနေ့မျိုးကိုတောင် ကျနော်မဆင်းပဲ သင်္ဘောပေါ်မှာပဲ နေပီး Chat မိတဲ့အထိပါပဲ။ ကျနော်တို့ချတ်ရွမ်းက member တွေဟာ လည်း ကျနော့်လို ချတ်စွဲ နေတဲ့ သူတွေချည့်ပါပဲ မနက်လင်းလင်းချင်း မျက်နှာမသစ်ခင် ကွန်ပျူတာဖွင့်ပီး ၀င်တာ ချတ်ရွမ်းပါပဲ။ ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ တရက်မပြတ် နေ့တိုင်း ၀င်ရောက်နေတဲ့သူတွေမို့ အားလုံးဟာ အရမ်းရင်းနှီးပီး တယောက် ယောက်များ မအားလို့ မလာခဲ့ရင် ဘာများဖြစ်လဲဆိုပီး စိတ်ပူတတ်ကြတဲ့ သူတွေပါ။ ချတ်ထဲမှာလည်း တွေ့ရင် အားလုံး ပြောကြတာက ဝေးလားဝါးလား ပါပဲ ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတာ နည်းပါတယ်။ အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ရင် ဟေးလားဝါးလား လုပ်သလိုပါပဲ။ စိတ်ညစ်စရာကောင်းရင် ဘယ်သူက စွဲမလဲဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေ အားလုံးဟာ အကျိုးရှိရဲ့လားဆိုရင်တော့ မရှိပါဘူး။ မရှိမှန်းသိရက်နဲ့ကို သိသိကြီးနဲ့ မဖြတ်နိုင်တော့လဲ ခက်တယ်ဗျာ။ အခုဆိုရင် ကျနော့်မှာ လုပ်စရာတွေ ပုံနေပီ Sea Time ပြည့်ရင် ဖြေမယ့်စာမေးပွဲအတွက်လည်း ဘာဆို ဘာမှ ကို မပြင်ဆင်နိုင်ဘူး။ အလုပ်ချိန်မှာ အလုပ်လုပ် အလုပ်ပီးရင် ချတ် ပီးရင် အိပ်နဲ့ တကယ့်ကိုပဲ ဘာမှကို လုပ်ချိန် မရှိပါဘူး။ ချတ်ကို ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားဖူးပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဘိန်းစွဲနေသလိုကို စွဲနေတော့ အရမ်းကို ခက်ခဲပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီတော့ ကျနော်ဟာ ဆေးခါးမှန်းသိရက်နဲ့ မြိန်မြိန်ကြီး သောက်သုံးနေတဲ့ လူငယ်တယောက်ပါပဲ။ အခုချိန်မှာ တော့ ကျနော်ဟာ ဆေးခါးကို ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါပီ။